benzi - Nyambo dzino kodza mwoyo
Nyambo dzine tag 'benzi'
Ndomapenzi chaiwo aya
Rimwe benzi rakasangana nerimwe benzi rakanga rakabata chirauro, ndokubva raribvunza kuti "nhai kasi urikuenda kunoraura?". Zvikanzi aiwa ndirikuenda kunoraura. Rakanga rabvunza ndokubva rati "hooo ndangandafunga kuti uri kuenda kuno raura"
benzi kuraura mupengo
wanga was iya remote
Kombavha yakanoba D.V.D pamwe pamba zvakabudamo zvakatsomana nebenzi mbavha yakasvika pakuneta ikamira yaona kuti speed yaiuya nebenzi haiite benzi rakasvikoti wangawasiya remote.
Rimwe benzi rakagara haro mumuti...ndobva rangozvidonhedza pasi vanhu vaiva pasi vakati ko chii zvikanzi ndiri avocado...ndaibva
benzi dofo avocado
benzi mupengo chikafu chiremba
benzi huku nyama
Wanga wasiya remote
Mbavha yakanoba DvD player pamba paigara benzi, zvakabuda zvakasonana mbavha ichitiza. Mbavha yakasvika pakuneta ndokumira. Benzi rakasvikawo richibata mbavha richifemereka zvikanzi “wanga wasiya remote”..
benzi pastor church pentecostal mufundisi mwari
Pilot achidzidzisa benzi ndege
Pane ndege yaive nema penzi aienda kumental therapy kuChina . Rimwe benzi rakaenda kuna pilot zvikanzi ndidzidzise ku operator ndege
Pilot: tanga wanyararidza vamwe vako.
Benzi : ok no problem
Akabuda within a second manga manyararwa ndokudzoka akadzidziswa ndege kusvika akugona.
Pilot: ko iwe manyararwa kudai kwakanAka here
Benzi : no ndavavhurira door ndikati endai kunotambira panze ndimbodzidziswa ndege.
benzi china ndege
Rimwe benzi rakatenga sugar 20kg, rikadira murwizi. Rakabva ratanga kunwa mvura rikanzwa isinganaki, rikabata musoro rigere pasi richichema.
Pakabva pasvikawo rimwe benzi, rikabvunza kuti unochemei? Iro rikati ndadira 20kg yesugar murwizi asi mvura haisi kunaka.
Zvikanzi iwe unenge unonyanyisawo kupenga! Wakurunga here?
benzi rwizi tsvigiri
benzi mupengo basa mota